Izinzuzo kusukela yokufuna a imfundo ephakeme idiploma zisobala futhi saxoxa isikhathi esingaphezu kwesisodwa. Lapha bese ugcine imizwa, imithombo yezimali, isikhathi. Ake sibheke ezinye izici izinzuzo, ezifana rationality okuthengile ukwenza nokuhlobana.
Kungani kubalulekile ukuthenga diploma yemfundo ephakeme?
Okokuqala, intsha yanamuhla, kuhlanganise amantombazane, ekuqaleni uqale umsebenzi wakhe. Lokhu kungenxa yokuntuleka imali, isimo kwezenhlalo noma kwezomnotho abampofu isimo.
Uyavuma ukuthi imfundo, ikakhulukazi esigcwele kukwenza kungenzeki ukuba uthole umsebenzi evamile nge ngihola kahle? Yingakho abantu kuqala esisebenzayo ngifuna umsebenzi, uthole okuhlangenwe nakho, bese ukhethe isikhathi sokuqeqesha ithuba ukuthenga nge-diploma imfundo ephakeme.
Ngesikhathi esifanayo ungaba isipiliyoni kanye idigri kwi okukhethekile efanele. amathuba yakho emakethe yezabasebenzi Kulezo zimo kuyoba okuningi ephakeme kuqhathaniswa izicelo eziningi.
Okwesibili, waqinisekisa ukuhlobana eyinkimbinkimbi yokunquma ukuthi lo mbhalo uyiqiniso. Nakuba ayikho izidingo iyunifomu ukuqinisekiswa kuwo imfundo diploma. Kuyadingeka ukusebenzisa kwakungenzeka lokhu, khona-ke kuyoba kwephuze.
Manje cabanga isici rationality.
Enomqondo ukuthi bachithe imali ithola imfundo engokomfanekiso? Enomqondo ukuthi ukuchitha isikhathi lapho ukhona esikhathini efanayo babeyovikeleka akwazi ukuthola imali eningi futhi ukuxazulula ezinye izimpikiswano ezibalulekile? Enomqondo ukuthi ahlale ebusuku nge coursework futhi iziqu phrojekthi, lapho imizamo yakho ngokuyisisekelo akudingeki othisha? Kungani konke lokhu lapho ungathenga diploma imfundo ephakeme futhi ugweme lezi zindleko?!
Ngiyavuma ukuthi kukhona abanye logic kanye rationality e mazwi angenhla?
Ezemfundo eyunivesithi akuqinisekisi wena ukuthola ulwazi. Ungakwazi ukufundisa ezimbi, kusukela ungakwazi ukuqoqa njalo imali ukulethwa umbiko noma ukuhlolwa, ungavele trite ngeke bafune ukufunda. Khumbula, umuntu ofisa ukuthola ulwazi endaweni ethile, isifiso eyodwa kuphela kufundza ukufunda isiphi isiyalo.
ukuphendula umbuzo ongadinge mpendulo Manje: kungani konke lokhu lapho ungathenga diploma semfundo ephakeme, futhi basindiswe isikhathi nemali ukuchitha ngakolunye uhlangothi?!
Kungani enomqondo ukuthenga diploma yemfundo ephakeme?
Ucabangani, ukuthi izinga lemfundo abafundi ukuthola namuhla emayunivesithi Russian okwamanje?
Njengoba umkhuba ubonisa, okusekelwe lobuya abaqashi, osomabhizinisi nabanikazi bamabhizinisi, abafundi eza University of kwebhentshi noma Institute, onolwazi omncane. Ngakho mina ukuthenga diploma imfundo ephakeme ungcono ngayo ezingeni okungabazekayo?!
Ake sibheke le ndaba ngezindlela ezimbili: by ukwenqena abafundi ukufunda kanye nokuntuleka efaneleyo phezu ingxenye yesikhungo.
Siqala kusukela mzuzu lokuqala. Kungakhathaliseki umfundi, kodwa uma engathandi ukuba bathole ulwazi, khona-ke ngeke uthole kubo. Kungenzeka yini ukubhala izinkulumo, ukuba ningazindli umsebenzi wesikole wasekhaya, izikhathi eziningi ukuba thatha futhi bamba futhi uvivinyo izivivinyo ngesikhathi esifanayo ukuthola diploma amamaki eyamukelekayo?! Prakthiza ebonisa ukuthi kungenzeka. Ngenxa yalokho, umqashi livele umsebenzi indoda, cishe akanalo noluncane ulwazi kanye umfundi enqubeni yokufunda is kokuchitha isikhathi, imali, ekupholiseni izinzwa, amathuma aphuthelwe.
Yingakho inani elikhulu labantu yesimanje bakhetha ukuthenga diploma imfundo ephakeme. Vumelanani ngokuthi izinto ezingenangqondo ukuchitha isikhathi sabo siqu, angasetshenziswa ngakolunye uhlangothi, imali, okuyinto ungakwazi ukuthenga ezinye izinto eziyigugu, imizwa, okuyinto, uma ukholelwa ukuthi ukukhangisa ku-TV, musa zilulame?! Abantu abaningi siyalazi leli qiniso, ngakho unquma ukuthenga diploma imfundo ephakeme kunokuba balethe imihlatshelo yabo ngenhla.
Cabanga eyimfanelo yesibili, okuyinto ekhathaza non-professional indlela eya abafundi baseyunivesithi. Yiqiniso, sikhona esikolweni yonke imininingwane ebalulekile evumela ukuba afeze zemfundo nemisebenzi, ukugunyazwa kanye igunya, kodwa lokhu akusho ukuthi okuso leso sikhungo sizothola imfundo esezingeni eliphezulu.
Iningi lazo zidalwe ukuze uthole inzuzo futhi ukwandisa inhlalakahle abanikazi. Uma sikhungo, Academy, inyuvesi ekuqaleni waphishekela umgomo ofanayo, imfundo enhle, wena cishe ukuze uthole. Ngoba wena ukuqasha othisha ukuzibhala, uzokwenza okusezingeni eliphezulu ukufundisa Imali, unganikezi ezifanele umtapo Isikhwama - kulula ukuthenga diploma imfundo ephakeme ukwedlula ukondla zemfundo zokunganaki.
IPCE: incazelo, ikheli
Tver State University, Faculty of History: okukhethekile
Ingane yami uhamba phezu tiptoes, yini okufanele uyenze?